6 istaraatiijiyad oo lagu xadidayo qasaaraha | Dhaqaalaha
6 istaraatiijiyad oo lagu xadido khasaaraha
Mid ka mid ah xaaladaha ugu xun ee soo kici kara ayaa ah inaad ku dhacdo qasaarooyinkaaga maalgashiga. Kaliya ma noqon doonto dhacdo aan loo baahnayn, laakiin waxay kuu keeni kartaa madax xanuun aan caadi ahayn. Sababtoo ah boos kuma heli doontid inaad iibisid saamiyadaada iyo khatarta ku soo korortay ee ah in saamiyadaadu ay sii wadi doonaan qiimo dhaca suuqyada maaliyadeed. Ilaa heer ay tahay wax aad in ka badan hal jeer kala kulantay taariikhdaada maalgashade yar iyo dhexdhexaad.
Istaraatijiyadahaaga oo dhan waa inay ahaadaan kuwo looga dan leeyahay in laga fogaado xaaladdan xun. Laakiin inta badan kiisaska ma lihid xulasho aan ahayn inaad iyaga u qaadato natiijada ka dhalan karta suuq la'aanta suuqyada lafteeda lafteeda. Waa wax ka baxsan koontaroolka waxqabadkaaga. Halka aad ku heleyso wax ka badan laba xal. Ama ku iibso saamiyada natiijada naafada. Ama, liddi ku ah, sug in waxyaabaha si fiican kuugu socdaan oo qiimaha saamiyada dib loo soo celiyo ilaa ay ka gaarayaan qiimaha iibka isla.
Dhamaantood, laga bilaabo hadda waxaad lahaan doontaa istaraatiijiyado maalgashi oo isdaba joog ah oo kaa caawin doona qasaaraha suurtagalka ah ee aad ka abuuri karto hawlgalladaada sinnaanta. Way fududahay in la codsado umana baahna aqoon gaar ah oo ay ku fuliyaan wixii hadda ka dambeeya. Waxay yihiin dabeecado kala duwan si aad u soo dhoofiso iyaga oo ku xidhan astaanta aad u soo bandhigtay maalgaliye ahaan: dagaal badan, dhexdhexaad ah, ama difaac ah. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay noqon doontaa aalad ku siin doonta waxqabad aad u weyn ficiladaada. Waxayna u badan tahay kalsooni badan oo ku saabsan waxqabadkaaga adduunka lacagta.
1 Miyaad iska ilaalin kartaa khasaaraha suuqa saamiyada?
2 Furaha koowaad: kala duwanaansho
3 Furaha labaad: maaraynta firfircoon
4 Furaha seddexaad: isku dar dhowr
5 Furaha afaraad: ka bax xuduudaha
6 Furaha shanaad: xaddid tabarucaadka
7 Furaha lixaad: maya kuwa casriga ah
Miyaad iska ilaalin kartaa khasaaraha suuqa saamiyada?
Dabcan, wey kugu adkaan doontaa inaad iska ilaaliso muuqaalka muuqaalkan. Ma aha in la yiraahdo ficil ahaan macquul maaha. Layaab malahan, suuqa saamiyada ma ahan saynis wax walbana way dhici karaan, oo ay kujirto inaad lumiso euro ka badan intii laga filaayay howlaha saamiyada ee aad hada kadib fuliso. Laakiin maxay haa tahay heli karo waa in la xadido iyaga. Si hadhaaga xisaabtaada hubinta aysan u abuurin wax ka badan hal xanaaq sanadaha soo socda. Si tan loo sameeyo, waxaad kaliya u baahan doontaa inaad raacdo qaar ka mid ah talooyinka aan kuu soo bandhigi doonno.
Si loo gaaro ujeeddooyinkan muddada dheer la sugayay, ma aha oo keliya inaad fuliso tilmaamo aad u cad oo si fiican loo qeexay oo loogu talagalay tallaabooyinka. Laakiin sidoo kale waxay kuu noqon doontaa lagama maarmaan inaad bedesho qaar ka mid ah caadooyinka aad ku leedahay xiriirka aad la leedahay suuqyada sinnaanta. Iyadoo nasiib yar iyo edbinta qaarkood ma yeelan doontid dhibaatooyin xad-dhaaf ah laga bilaabo hadda, dheelitirka koontada hadda jirta si xad-dhaaf ah uma dhibaatoobin. Ilaa heer aad lumin karto qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah hantidaada gaarka ah.
Furaha koowaad: kala duwanaansho
Waxay noqon doontaa sharci aasaasi ah si looga ilaaliyo keydkaaga xaaladaha aan loo baahnayn ee sinnaanta kuu keeni karto. Istaraatiijiyaddan maalgashiga waxaa loo isticmaali karaa iyada oo aan lagu maalgelin kaydintaada qiimo uun. Laakiin dhowr iyo haddii ay suurtagal tahay way ka yimaadaan hantida maaliyadeed ee kala duwan. Go'an, is bedbeddelaya, dakhliga beddelka ah iyo suuqyada maaliyadeed ee cusub ayaa ah habka ugu fiican ee lagu qaabeeyo faylalkaaga xilliyadan saxda ah.
Xitaa iyada oo loo marayo badeecad maaliyadeed oo ururinaysa tabarucaadyadan maalgashiga. Maalgelinta maalgashiga ayaa si hufan uga mid ah soo jeedimaha sida ugu wanaagsan u qabsan kara isbeddelkan gaarka ah. Sababtoo ah saameyn ahaan, jagooyinkaaga waxay ka koobnaan karaan hanti maaliyadeed oo kala duwan. Laga soo bilaabo curaarta shirkadaha ilaa iibsiga saamiyada ee suuqyada maaliyadeed ee asalka ah ee aad hadda heli karto. Iyadoo leh natiijooyin aad u qanciya dadka isticmaala xeeladahan.
Furaha labaad: maaraynta firfircoon
Shaki kuma jiro in ficilkani kaa caawin doono inaad si fiican u maamusho maalgashigaaga. Gaar ahaan xaaladaha ugu xun ee suuqyada maaliyadeed. Sabab aad u qaas ah waana taas in la ogaado la qabsashada dhaqdhaqaaqa dhammaan xaaladaha suuragalka ah. Laga soo bilaabo faa'iidada ugu badan ee danahaaga shakhsi ahaaneed ilaa waxa ka dhasha xilliyada dhaqaale xumida. Sidoo kale waxay leedahay faa iidada muhiimka ah in maareeyayaasha laftooda ay mas'uul ka noqon doonaan fulinta isbedeladan iyadoo kuxiran xaaladaha marwalba soo ifbaxa.
Dhibaatada ugu weyn ee fulinteeda ayaa ah in wax yar oo bangiyada ama alaabooyinka maaliyadeed ay bixiyaan muuqaalkan. Haddana waa lacagaha maalgashiga kuwa adiga kuugu deeqaya xooggooda oo dhan. Iyada oo ku hoos jirta maaraynta firfircoon ee keydkaaga taasina waxay kaga duwan tahay qaababka maalgashiga dadban. Kuwaas oo ah kuwa had iyo jeer isku halleeya isla halabuurka. Wax kastoo dhaca iyo xitaa haddii dhibaatooyin daran ay ka dhacaan qaar ka mid ah suuqyada maaliyadeed ee la xushay. Waa farqi weyn oo kaa caawin kara inaad dhibaatada ka baxdo. Gaar ahaan xilliyada bearish ee sinnaanta.
Furaha seddexaad: isku dar dhowr
Mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan si khasaarahaagu uusan u weyneyn waa in loo qeybiyo keydkaaga alaabooyin maaliyadeed oo kala duwan. Ka imanaya dakhli go'an iyo mid isbedelaya labadaba ama xitaa xulashada suuqa kale ee aan caadiga ahayn. Halka kuwa alaabta ceeriin, biraha qaaliga ah ama lacagaha ay noqon karaan kuwa ugu soo jeedin badan in la isku daro maalgashigaaga wixii hada ka dambeeya. Natiijooyinka, sida aad arki karto, waa kuwo cajiib ah maadaama khasaaruhu si weyn hoos ugu dhici doono. Si wax ku ool ah oo ka badan intaad qiyaasi karto bilowga.
Sidan oo kale, waxaad ku jirtaa booska aad ku isku dar kaydinta waqtiga, waraaqaha bangiga, iibsiga iyo iibinta saamiyada, maalgashiga ama lacagaha ku taxan iyo xitaa xisaabaadka hubinta dakhliga badan. Natiijo ahaan istiraatiijiyaddan waxtarka leh, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad doorato badeecooyin aad u casri ah oo ku siin kara dib u soo celin ballaaran oo ku saabsan tabarucaada dhaqaale. Faa'iidada aad haysato ayaa ah inaad ku jiri doonto xaaladaha ugu fiican si aad isugu darto wax soo saar ama hanti dhaqaale.
Furaha afaraad: ka bax xuduudaha
Si loo yareeyo khasaaraha aad soo saari karto hadda kadib, waxaad sidoo kale aadi kartaa suuqyada kale ee caalamiga ah ee sinnaanta. Layaab malahan, had iyo jeer waxaa jira qaar u dhaqma si ka wanaagsan kuwa kale waxaadna uga faa'iideysan kartaa qaldankan sida ay ugu socdaan qiimahooda. Waxay ku siin doontaa farqi aad u fiican iska ilaali xaaladaha aan fiicnayn danaha raasamaalkaaga maalgashiga ah. In kasta oo aadan haysan ikhtiyaar aan ka ahayn inaad la kulanto guddiyo ballaadhan oo kugu kici doona waxqabadyada suuqyada sinnaanta ee ka baxsan soohdimaheenna.
Dabcan way ku caawin doontaa ka faa'iideyso fursad kasta ganacsiga la soo bandhigo. Waqti kasta iyo meelo kala duwan. Ma jiraan wax xaddidan oo hawlgalladaada ah maxaa yeelay waxaad kaliya noqon doontaa midka ka soo rogaya dariiqooyinkaaga si aad ula xiriirto adduunka lacagta adag. Laga soo bilaabo saamiyada Mareykanka ilaa kuwa qaaraddii hore, waa inay iska ilaawaan suuqyada saamiyada Aasiya ama xitaa Laatiinka. Waxay ku lug leeyihiin khatar weyn, laakiin isla markaa abaalmarinta ayaa ka sarreysa. Had iyo jeer iyada oo ujeedadu tahay in la xadido khasaaraha ka soo baxa dakhligaaga.
Furaha shanaad: xaddid tabarucaadka
Hab kale oo wax ku ool ah oo loo ilaaliyo danahaaga maalgashade yar iyo dhexdhexaad. Sababtoo ah way kuu oggolaan doontaa yaree naafada hab xagjir ah. Layaab malahan, lacagta halista kujirta way yaraan doontaa sidaa darteed waxaad la kulmi doontaa khataro kayar kuwa kale marka loo eego xaaladaha kale ee balaaran marka laga eego dhanka lacagta. Sababtoo ah saameyn ahaan, uma baahnid inaad maal gashato dhammaan raasumaalka la heli karo, laakiin qayb ka mid ah, iyadoo kuxiran baahida dhaqaale. Xitaa iyada oo tabaruc aad u yar si looga fogaado qaadashada khataraha xad-dhaafka ah ee dhaqdhaqaaqaaga suuqa saamiyada.
Intaas waxaa sii dheer, waxay ku siin doontaa adiga xaqiiqda ah inaad lahaan kartid lacag badan markii fursadaha ugu fiican ay ka soo baxaan mid ka mid ah suuqyada maaliyadeed. Wax aan suurtagal ahayn, haddii liddi ku ah, waxaad maalgelinaysaa dhammaan raasamaalkaaga hal mar. Haddii aad u qoondeyso inta u dhexeysa 20% iyo 60% ee keydkaaga, waxay ka badnaan doontaa in lagu qanciyo himilooyinkaaga maalgashi. Iyaga oo uga tagaya xamuulkooda howlaha cusub bilaha soo socda.
Furaha lixaad: maya kuwa casriga ah
Ugu dambeyntiina, ma iloobi kartid inaad ka maqnaato naftaada inaad boos ka hesho alaabada aadka u dagaal badan waxay kaa caawin doontaa inaad maamusho caasimadaada. Qaar badan oo ka mid ahi waxay ku lug leeyihiin khataro xad-dhaaf ah iyo gaar ahaan haddii aadan haysan aqoon dhaqaale oo kugu filan oo aad kula shaqeyso soo-jeedimahan. Meesha horumar xun oo iyaga ka mid ahi kugu sababi karo lumiya lacag badan oo yuuro ah dhanka kale. Ilaa heerar aad khatar ugu noqon kara danahaaga. Halka ay xitaa macquul tahay inaad ka tagto qeyb wanaagsan oo ka mid ah caasimada bartamaha.
Dammaanadaha, iibinta amaahda, soo-saarka iyo qaar ka mid ah maal-gashiga maal-gashiga ayaa ka mid ah alaabtaan halkaasoo aad ku waayi karto lacag ka badan intii loo baahnaa. Ilaa heer aad u aragto inaysan u qalmin maalgelin lagu sameeyo moodelladan gardarada ah marka loo eego farsamadooda. Sidoo kale ma iloobi kartid badeecooyinka aad ugu eg sun ah iyo inay ka tageen saf dhibanayaal intii ay jidka ku jireen. Iyadoo howlaha garsoorka ay ku lug leeyihiin. Waa wax ay tahay inaadan sameynin haddii hamigaaga ugu weyn uu yahay inaad kaydsato keydkaaga kharash kasta haku lahaadee. Midkoodna, si looga fogaado inaad waqti xun kuhesho xaaladaada shaqsiyeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » 6 istaraatiijiyad oo lagu xadido khasaaraha
Kharashyada laga jari karo
Maalgelinta dakhliga go'an: mid kale oo kaydkaaga ah